Ity ny matrix LED izay mampiseho ireo marika mihetsika amin'ny HomePod | Avy amin'ny mac aho
HomePod an'ny Apple dia fahagagana amin'ny injeniera tsy amin'ny fitaovana ihany fa amin'ny feo ihany koa ary izy no mpandahateny voalohany izay afaka 39 taona nanamarinana fa manana kalitaon'ny feo tafahoatra lavitra noho izay hitantsika amin'ny marika hafa. Andro vitsy lasa izay dia nasehoko ny ekipako HomePod tamin'ny teknisianina mpandefa feo mahay mandre na dia mamoaka feo aza ny hazavan'ny teatra toy ny tabataba amin'ny signal audio izay alefa.
Rehefa naheno ny HomePod izy dia tsy nandany minitra nilaza fa fitaovana kely paika izy io ho an'ny kalitaon'ny feo vokariny. Mahagaga ny bas azony averina aorina ary ambonin'izany, ny tsy fisian'ny fanaraha-maso bokotra hanomezana lalana ny fanaraha-maso mikasika dia manome teboka fanampiny azy.
Araka ny efa nolazaiko anao, ny HomePod dia manana faritra mikasika izay nametrahana matrix LED hahafahana mamorona sary mihetsika 5 ambany famahana rehetra amin'ny loko samihafa sy amin'ny fihetsehana. Lazainay fa ambany ny sary satria tsy efijery LED kely akory izy io izay misy pixel an'arivony fa matrix misy LED 19.
Ity matrix misy 19 LED ity dia manana endrika boribory ary nilahatra nifanesy izy ireo, nanomboka tamin'ny andalana 5 LED tao amin'ny faritra afovoany, avy eo LED efatra teo amin'ny lafiny roa tamin'io laharana afovoany io ary nifarana tamin'ny laharana roa hafa misy LED telo, ao amin'ny fitambarany 19 LEDs. Io matrix io ​​dia novokarin'i Texas Instrument ary manana ny encoding manaraka, Texas Instruments TLC 5971 mpamily LED.
Mba hahafahana mamorona sary, ity singa ity dia azo alamina fandaharana ary mba hahatonga ny sary ho tsiranoka kokoa, faritra kely translucent fotsy no napetraka eo amboniny. avelao hahita jiro miely misimisy kokoa, amin'izay afaka mamorona ireo sary izay efa asehonay anao amin'ny lahatsoratra iray hafa.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Avy amin'ny mac aho » Apple products » Ity ny matrix LED izay mampiseho ireo marika mampihetsi-po amin'ny HomePod
Ahoana ny fomba fampiasana CD na DVD fiara amin'ny Mac anao
iPhone 8 (RED), Vimeo amin'ny Mac, kaonty Facebook an'i Woz, ary maro hafa. Ny tsara indrindra amin'ny herinandro dia avy amin'ny Mac aho